China White M104 / Milky white M102 / Opaque white M101 mveliso kunye nabenzi | IBaizan
Ukukhanya okumhlophe M104 / Milky emhlophe M102 / Opaque emhlophe M101
Ubisi White Pvb
Sihlala sinika iifoto ezi-3 zokulayisha umthwalo kubathengi.
Akukho nto yomfanekiso wesikhongozeli
Kuqala, ngaphambi kokulayisha, sithatha umfanekiso wesikhongozeli esingenanto
Emva koko, sisebenzisa i-forklift ukulayisha isikhongozeli. Ukunciphisa iindleko zothutho, kufuneka silungiselele iimpahla ngendlela efanelekileyo ukuze indawo yesikhongozeli isetyenziswe ngokupheleleyo. Oku kulandelayo yimveliso yeenkcukacha ezahlukeneyo kunye nobungakanani obukhulu besikhongozeli se-20GP.
Uhlobo lweenkcukacha kunye nomthamo wesikhongozeli
ubukhulu （mm） ububanzi (mm) ubude (m / 卷) 20'inkonkxa (㎡)
Umfanekiso womnyango wesikhongozeli
Okokugqibela, sinikezela ngomfanekiso womnyango wesikhongozeli, iqulethe ulwazi olwahlukileyo olufana nenombolo yesikhongozeli njl.
Kukho iindlela ezintathu zokuhamba onokuzikhetha
Uninzi lwabathengi ikakhulu bakhetha ukuthuthwa kolwandle. Ukuhamba ngolwandle kunezibonelelo zobungakanani obukhulu kunye nexabiso eliphantsi.
Kuxhomekeka kumgama oya kumthengi, ixesha lokuhambisa livela kwiveki e-1 ukuya kwiinyanga ezi-2
2. izithuthi zikaloliwe
Ukuya kumazwe aselumelwaneni, singasebenzisa uloliwe ohamba ngololiwe
Xa kuthelekiswa nokuthuthwa kolwandle kunye nokuhamba ngomgaqo kaloliwe, inezibonelelo zesantya esiphezulu, kwaye hayi phantsi kwemida yeemeko zomhlaba. Ukuba umthengi une-odolo engxamisekileyo, sinokukhetha uthutho lomoya.
Egqithileyo ukukhanya okuluhlaza GN101 / Vridis GN108
Okulandelayo: Umdaka ophakathi BK104 / Umdaka ophakathi BK103
ukukhanya okuluhlaza GN101 / Vridis GN108